Iwebhusayithi yamaShayina (i-ejenti elwa namagciwane)
Iwebhusayithi yamaShayina (i-anti-hydrolysis agent)
Yini indwangu elukiwe elwa namagciwane?
Ubhadane lwangowezi-2020 aluwazisanga umphakathi ngezinto zokwaluka kuphela, kodwa luphinde lwahlaba umxhwele umphakathi ngokusetshenziswa kwalo nokusebenza kwalo kumamaski. Eqinisweni, izindwangu ezingalukiwe ziyizinto ezivamile zokuvikela ezempilo nezempilo, futhi zinezicelo ezibalulekile kumaski, ezembatho zokuvikela, ...
Ukudalula: Zenziwa kanjani izinto zokulwa namagciwane?
Ngemuva kobhadane, ukuqwashisa kwawo wonke umuntu ngama-antimicrobials sekukhule kakhulu. Imikhiqizo elwa namagciwane ngokushesha yavela emkhakheni wokubuka womphakathi. Ingqikithi yemikhiqizo elwa namagciwane ilele ezintweni ezilwa namagciwane! Ngakho-ke kwenziwa kanjani okokulwa namagciwane? ILangyi New Mate ...
Amakhemikhali efoni elwa namagciwane —ukusetshenziswa okuthandwayo kwepulasitiki elwa namagciwane
Impilo yethu yansuku zonke ihlobene kakhulu nomakhalekhukhwini. Abantu sebethembele kakhulu kumaselula. Amagciwane akumakhalekhukhwini awanakwa kalula ngabantu abaningi. Ngokwenhlolovo, amaphesenti angama-92 omakhalekhukhwini kanye nabanikazi abangama-82% baphethe amagciwane ezandleni. Phakathi kwabo, ama-25% we-mobi ...
Izindlela ezinhlanu zokulungiselela zeplastikhi elwa namagciwane
Ngokuthuthuka komnotho okusheshayo nokuthuthuka okuqhubekayo kwamazinga abantu okuphila, abantu banaka ngokwengeziwe indawo yabo yokuhlala enethezekile, enempilo futhi ephephile. Kodwa-ke, kuvame ukuba nenani elikhulu lamagciwane, isikhunta kanye nama-virus ezintweni ...
Icala Lensizakalo | Sombulula inkinga ye-PET monofilament hydrolysis
Incazelo Yenkinga】 Isihlungi sokomisa esisetshenziswa embonini yephepha yi-PET monofilament. Isetshenziselwa ukushisa okuphezulu nemvelo enomswakama isikhathi eside. Isihlungi se-PET sithambekele ekuphenduleni kwe-hydrolysis. Ukungeza umenzeli we-HyMax® anti-hydrolysis ku-PET monofilament kunganweba insizakalo ...
Iyini i-copper ion antibacterial fiber?
Imicu yokulwa ne-antibacterial engezwe ngensimbi ion antibacterial agents ithuthuke ngokushesha eminyakeni yamuva. Inezici zokuphepha okuphezulu futhi akukho ukumelana nezidakamizwa, ikakhulukazi ukumelana kwayo nokushisa nokuqina kwamakhemikhali, futhi isetshenziswe kabanzi ku-fiber nakweminye imikhakha ....
Ungayikhiqiza kanjani indwangu yesiliva elwa namagciwane?
Indwangu yesilwi elwa namagciwane uhlobo olusha lwefayibha esebenzayo enezindawo ezilwa namagciwane. Kunezindlela ezimbili zokukhiqiza indwangu yesiliva elwa namagciwane. Enye indlela ukwengeza isiliva ion ejenti elwa namagciwane ebusweni bendwangu, enye indlela ukuyifaka dir ...
Abasendulo basebenzise kanjani isiliva nethusi ukuvimbela amabhaktheriya?
Ezikhathini zasendulo, ukuqwashisa kwabantu ngokuthuthwa kwendle kwemvelo bekubuthakathaka, futhi amandla abo okuvikela nokuxilonga izifo abephansi kakhulu. Izifo ezahlukahlukene ezibangelwa ukutheleleka ngamagciwane, njengekholera, isifo sofuba kanye nohudo. Abantu ngaleso sikhathi babengazi ukuthi ba ...
Ukuphindaphindeka komqedazwe, ubuchwepheshe beLangyi's silver ion antibacterial black ithuthukisa ukuvikelwa kwemaski
Muva nje, umqedazwe omusha womqhele ukhombise ukuthambekela kokuphindaphindeka eChina. Ngenkathi ohulumeni basekhaya beqala ukuqinisa ukuvimbela nokulawulwa kwalo bhubhane, abantu bavuselele ukunakekela kwabo ekuzivikeleni kwabo. Ukugqoka amaski ukuvikela okuyisisekelo kakhulu lapho uphuma. Amaski abe ...
Kungani i-silver ion ingaba nomphumela wokulwa namagciwane ongapheli?
Lapho ama-athomu esiliva elahlekelwa i-elektroni elilodwa noma amaningi, aba ama-ion esiliva. Ama-ion esiliva ngokuvamile anezifunda ezintathu ze-valence: Ag +, Ag2 + no-Ag3 +. Ama-ion esiliva anezakhi eziqinile ze-oxidizing futhi asetshenziswa njengemithi, njengoba kuqoshwe kwi-pharmacopoeia yanamuhla. Kunemithi emine equkethe ama-ion esiliva ...
Isixazululo se-anti-hydrolysis sePolyester (PET PBT)
I-Polyurethane uhlobo lwezinto ze-polymer ezinezakhiwo ezikhethekile. Ihlanganisa izici zokusebenza kwezinto ezahlukahlukene kusuka kuplastikhi, ama-elastomer kuya ezinengilazi, njengobubanzi obuqinile, amandla aphakeme, ukumelana kokugqoka, ukumuncwa okuhle kokudlidliza, ukumelana nemisebe, ne-Air pe ...
Umswakama uthinta izakhiwo ezahlukahlukene zama-polymers. I-silica gel, i-silica gel elungisiwe, noma i-isocyanate izosabela ngamanzi ngokushesha. Ngakho-ke, ukwengeza isikhutha somswakama (Umswakama Wokugcoba) ngesikhathi sokugcina ukugcina ukuzinza kwezinto zokusetshenziswa kuyadingeka. Ngama-polymers aqinile futhi abunjiwe, ...
Ikheli: Cha. 1 Bldg., No.188 Yonghang Rd., Songjiang Dist., Shanghai, 201699, PRC
Ucingo: +86 021 6779 9029
Umenzeli weSiliva Ion Antibacterial, Anti Virus lengetiwe, Anti Hydrolysis lengetiwe, I-Masterbatch elwa namagciwane, Umenzeli wamagciwane, Intambo elwa namagciwane,
Isicelo Samahhala Samahhala